Mmetọ Fukushima | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Fukushima, mkpochapu mmiri kpamkpam
Usoro mmetọ nke ALPS mmiri sitere na osisi mebiri emebi nke Fukushima Ahụ ya kpọnwụrụ akpọnwụ kemgbe May 20 n'ụtụtụ, mgbe ọ kwụsịrị usoro ọgwụgwọ nke atọ.
Ngwaọrụ, nke a na-eji ewepu ihe dị ka iri isii radionuclides nke mmiri na e ji mee ka ihe ndozi dị jụụ, mejupụtara ahịrị atọ yiri nke mmetọ.
Abụọ ndị mbụ (A na B) kwụsịrị ịrụ ọrụ ụbọchị ole na ole gara aga. Onye nke atọ (aha ya bụ C) kwụsịrị n’isi ụtụtụ n’ihi mbibi nke nloghachi ha.
Ihe na-akpata ihe ndị a niile nsogbu amaghi ma ulo oru akowaghi ya Tokyo electric ike (Tepco) nke na-eduzi arụmọrụ ahụ. Usoro EGO Ọ na-agba mbọ ịrụ ọrụ ruo ọtụtụ ọnwa, mana n'eziokwu ọ naghị akwụsị izute nsogbu dị iche iche.
Ngwaọrụ ndị otu Japan mepụtara Toshiba E gosipụtara ya iji dozie nsogbu nke mmiri emetọ sitere na osisi mebiri emebi nke Fukushima Daiichitsunami bibiri na nke mbụ na Machị 11, 2011.
Ihe karịrị 400.000 mita cubic nke mmiri rụrụ arụ na-echekwa ugbu a karịrị otu puku gigantic nkwụnye ego ngwa ngwa gbakọtara na mgbagwoju anya, na Tepco na-aga n'ihu ịwụnye iri anọ ọzọ n'ọnwa iji gbalịa ijide mmiri mmiri na-aga n'ihu nke amịpụtara site na ala nke saịtị na ogbugba mmiri na-adịgide adịgide nke ihe ndozi ebibi.
Nsogbu mmiri a bụ ihe kachasị sie ike ụlọ ọrụ na-eche ihu. ụlọ ọrụ na otu n'ime ndị kasị emetụta mba ụwa n'ihi ihe egwu dị na nje site na Pacific Ocean gbara agbata obi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » General » Noticias » Fukushima, mkpochapu mmiri kpamkpam
Shipsgbọ mmiri nke ọdịnihu ga-eri obere
Ọrụ nke mmanya cellar ntụ oyi